प्रचण्डबाट धो,का भयो भन्दै माधव नेपालले थाले परामर्श
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता संकट गहिरिइसकेको थियो । उनी सम्झौताका लागि बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री र माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्षको प्रस्ताव सम्म गर्न पुगेका थिए । यतिसम्मकी बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेरि माधव नेपाल निकटकालाई दिन […]
प्रचण्ड ज्यू ! जनता मा,र्ने ए,म्बुस र ब,म कहाँ-कहाँ छन् ?
काठमाडौं । मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक हुन लाग्दा पनि यु,द्धकालमा छा,डिएका बे,वारिसे ब,महरु नि,स्क्रिय न,पार्दा जनताले अनाहकमा ज्या,न गु,माइरहनु परेको छ । २०५२देखि २०६३ सम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको माओवादीे सश,स्त्र यु,द्धका क्रममा वि,द्रोही पक्ष र सरकारी […]
सरकार ढा,ल्न प्रचण्डको निर्देशनमा ह,स्ताक्षर अभियान सुरू
काठमाडाैँ । सरकारविरू,द्ध चौतर्फी घे,राबन्दी सुरू गरेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार ढाल्नका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरू गराएका छन । आफ्नो निवासमै सांसदहरूलाइ बोलाएर सरकारविरू,द्ध ह,स्ताक्षर मागिएको हो । प्रचण्डले ह,स्ताक्षर अभियान सुरू गरेपनि उनी निकटकै केही सांसदहरूले त्यसमा आपत्ति […]